Ahoana ny fomba ahazoana vatosoa maimaim-poana amin'ny Brawl Stars | Androidsis
Ahoana ny fomba ahazoana vatosoa maimaim-poana amin'ny Brawl Stars
DaniPlay | 28/04/2021 09:08 | Lalao Android
Izy io dia mety iray amin'ireo lalao video mihamitombo na dia efa maimaimpoana maimaimpoana aza nandritra ny fotoana fohy ho an'ny rafitra Android sy iOS. Ny fandefasana azy amin'ny faran'ny taona 2018 dia nahatonga azy nisintona betsaka, mahatratra 100 tapitrisa mahery ankehitriny amin'ny Android ary saika mitovy isa amin'ny rindrambaiko Apple.
Ao amin'ny Brawl Stars dia afaka mahazo vato soa maimaim-poana ianao, saingy mila mitandrina amin'ireo rindranasa izay mampanantena ny hanao izany ianao ary mety ho voarara ny kaontinao. Misy raikipohy marobe hahazoana ity vato sarobidy ity hividianana boaty fifandirana, boaty mega ary boaty lehibe, ary koa endri-tsoratra manokana, hoditra, tapakila ary mari-pamantarana manokana.
Ao anatin'ity lohateny fanta-daza ity dia ny micropayments izay handroso amin'ny fomba haingana kokoa ary hahazo singa samihafa, anisan'ireo zavatra afaka mampifanaraka ny toetra amam-panahy. Amin'ny vatosoa dia afaka manao zavatra maro ianaoNoho izany, ny fananantsika maro dia hahafahantsika mividy zavatra samihafa amin'ny lalao video.
1 Inona no atao hoe Stars Brawl
2 Mahazo vatosoa maimaim-poana amin'ny boaty
3 Mahazo vatosoa ao amin'ny Brawl Pass
5 Miaraka amin'ny GameHag
6 Mandra-pahoviana vao hahazoana 5699 na 8199 Soul Gems? / H2>
7 Ny maha-zava-dehibe ny vatosoa
8 Avoty ny vatosoa amin'ny ClipClaps
9 Milalao hahazoana tratra
Inona no atao hoe Stars Brawl
Brawl Stars dia multiplayer an-tserasera freemium ho an'ny finday. Ny tanjon'ny lalao dia ny hahazoana ny amboara na kaopy ambony indrindra. Ny mpilalao dia hilalao amin'ny fomba lalao samy hafa, miaraka amina litera samihafa hisafidianana ary iza no hiady hiakatra ny laharana.
Ireo mpilalao Brawl Stars dia afaka miditra amin'ny klioba miaraka amin'ny ankohonany sy ny namany, milalao lalao amin'izy samy izy, ary koa milalao ireto fomba manaraka ireto: Survival Irery, Heist, Siege, Fandrika, Duo Survival, Brawl Ball, Starfighter, Starfight, Zone voafetra, Megabrawl, ary ny rehetra manohitra ny iray.
Ao amin'ny Brawl Stars dia isaina amin'ny statistikan'ny mpilalao ny amboara, azo amin'ny hetsika mahazatra izy ireo rehefa mandresy ny lalao. Ny zavatra tsara iray dia ny fandresena azy ireo, fa raha resy kosa izy ireo dia hanjavona, ka mifaninana handresy ary hanangona ny be indrindra ao amin'ny galerianao.
Mahazo vatosoa maimaim-poana amin'ny boaty
Ny paikady hahazoana vato soa maimaim-poana ao amin'ny Brawl Stars dia amin'ny alàlan'ny fanokafana ireo boaty izany dia ho azo raisina amin'ny vatosoa mitovy ary handeha izany raha vao mandroso amin'ny lalao iray ianao. Ny Brawl Stars dia manana boaty telo miavaka telo ary ireto manaraka ireto: Brawl Boxes, Big Boxes ary Mega Boxes.
Ny voalohany dia iray amin'ireo mora indrindra, fa ny fahazoana ireo Big Boxes sy Mega Boxes dia hilalao matetika kokoa ary izy ireo no sarobidy indrindra amin'ny lalao. Megaboxes dia hanome antsika vatosoa maro hafa, Noho izany, raha mahazo ianao dia hanana habe betsaka kokoa noho ny Brawl Boxes sy Big Boxes.
Manana tombana 10% isika fa mikasika vatosoa, Brawl Boxes dia hanome antsika vatosoa 5 maimaim-poana, boaty lehibe hanome vatosoa 15 ary Megaboxes dia afaka manome antsika vatosoa 25. Ny farany dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ity Battle Royale ity, saingy io no kely indrindra azo handresena.
Ny Megabox dia tsy maintsy hividianana vatosoa, ny zava-drehetra dia hiankina amin'ny fotoana natokana hilalao io lohateny lehibe io izay mbola manana vondrom-piarahamonina lehibe ao ambadik'izany. Ny fomba tokana ahazoana vatosoa maimaim-poana dia amin'ny filalaovana sy fandresena amin'ny ady amin'ny namana, olom-pantatra ary ireo izay miady amintsika.
Mahazo vatosoa ao amin'ny Brawl Pass
Ny namorona ny Brawl Stars dia mamoaka ny mode Brawl Pass indraindray, hetsika iray izay anoloranao valisoa amin'ny fandresena tsirairay sy ny misiona feno. Brawl Pass dia manana fomba roa, ny iray maimaim-poana ary ny iray karama, samy manan-danja izy ireo ary ambonin'izany rehetra mahaliana.
Ny valisoa fandoavam-bola Brawl Pass, ny fidirana ao aminy dia mitentina 169 vatosoa amintsika, noho izany tsy maintsy manangona isika raha te hiditra amin'ity pass ity. Free Brawl Pass dia manome zavatra sasany ao anatin'izany ny boaty, vola madinika, chips sy vatosoa, amin'izay ianao dia afaka mandresy vatosoa maimaim-poana.
Manao ny iraka rehetra ho azonao any amin'ny Brawl Stars vatosoa 90 isan-karazany, ny zava-drehetra dia hiankina amin'ny haavon'ny fandrosoanao mandra-pahatonganao any amin'ny farany. Ny haavo 2 dia manome vatosoa 10, efa eo amin'ny haavo 14 dia mahazo vatosoa 10 hafa ianao, raha mahatratra ny haavo 22 dia avo roa heny hatramin'ny vatosoa 20, efa eo amin'ny haavo 36 dia misy vatosoa 10, amin'ny vatosoa 44 hafa 10, amin'ny 52 dia homeny Ny 10 hafa ary mahatratra 20 dia vatosoa 20 hafa. Ny pass rehetra azonao dia vatosoa 90, ampy hahazoana azy ireo maimaim-poana.
Big Boxes sy Mega Boxes dia azo vidiana ao amin'ny magazay Brawl Stars, na dia ny voalohany amin'izy ireo aza dia azo alaina ho valisoa amin'ny amboara amboara. Ny zavatra tsara dia ny fiakarana amin'ny laharana raha te hamaha azy ireo ianao, noho izany ny iraka dia ny milalao matetika raha te-hahazo vatosoa ianao, izay manana vintana 9% izay hikasihan'izy ireo.
Isaky ny boaty folo sokafanao dia mety hahazo 1 ianao farafaharatsiny mba hanana vatosoa, noho izany dia kely ny vintana ahazoanao. Zava-dehibe ny vatosoa rehefa manavotra azy ireo hahazo zavatra samihafa, Ho fanampin'ny fidirana amin'ny Brawl Pass, izay ahafahanao manana safidy roa, ny iray amin'izy ireo miaraka amin'ny vatosoa.
Nozaraina toy izao ireto boaty ireto: Boxe Brawl, matetika izy ireo dia eo anelanelan'ny vatosoa 3 ka hatramin'ny 5, ny boaty lehibe dia avy amin'ny vatosoa 3 ka hatramin'ny 15, ny megabox mazàna dia misy vatosoa 3 ka hatramin'ny 25. Ny voalohany, na eo aza ny tsy fananany be, dia iray izay azo antoka fa mikasika antsika imbetsaka noho ny faharoa na ny fahatelo.
Miaraka amin'ny GameHag
Gamehag dia pejy iray ahafahanao mahazo vatosoa ary atakalo vatosoa avy amin'ny Brawl Stars, takalo izay manan-kery ho an'ny fotoana izy ireo. Amin'ity fomba ity dia tsy hahazo sazy na vetoe an'ny mpizara ianao, io dia iray amin'ireo lalàna sy manan-danja, satria ampiasain'ny olona maro ankehitriny.
Ireto ny asa tokony hatao: ireto: milalao lalao, milalao minigames, mamita iraka, mampakatra horonan-tsary amin'ny YouTube miresaka momba ny Hamegag, avo lenta, manasa namana, manadihady, misintoma fampiharana, misintoma ny app GameHag, miteny amin'ny forum, mizara atiny amin'ny Facebook ary mampihetsika mailaka.
Raha vantany vao manana vatosoa 5.699 ianao dia afaka hatakalo $ 10 eo ho eo, izay sahabo ho 130 vatosoa avy amin'ny Brawl Stars, izay amin'ny farany no tadiavinay, hahazoana vatosoa. Mba hahatratrarana vatosoa 8.199 an'ny fanahy, ny fanovana dia manome 15 dolara eo ho eo, izay ny fiovana dia manodidina ny 200 vatosoa eo ho eo. Amin'izany vatosoa izany dia azonao atao ny mividy ny Brawl Pass.
Mandra-pahoviana vao hahazoana 5699 na 8199 Soul Gems? / H2>
Amin'ny fotoana faratampony amin'ny herinandro dia ho azo atao ny mahazo vatosoa be dia be hanakalo azy ireo amin'ny vatosoa Brawl Stars. Ny fizarana ny atiny dia hahazoanao teboka maro ary hahatonga azy rehetra hitranga amin'ny fanokanana adiny iray isan'andro, fara fahakeliny, eo anelanelan'ny 2 ka hatramin'ny 3.
Raha manapa-kevitra ny hilalao lalao GameHag ianao dia hanidina ny fotoana ary ny zavatra tsara indrindra dia ny afaka mahazo vatosoa fanahy hanakalo azy ireo amin'ny vatosoa amin'ny lalao video Android. Ny Brawl Stars dia mahazo tombony amin'izany noho ny fifanarahana nifanaovan'ny GameHag, izay etsy ankilany efa elaela no nanome vatosoa.
Ny farafaharatsiny 10 dolara (5.699) dia azo tanterahina ataon'ny olona maro ao anatin'ny fotoana iray izay maharitra 4 ka hatramin'ny 5 andro, fa izany rehetra izany dia manao devoara, milalao ary maro hafa. GameHag dia serivisy miasa tena tsara ary ankoatry ny maha iray amin'ireo fampiasan'ny vondrom-piarahamonina Brawl Stars, mihoatra ny antsasaky ny mampiasa azy io hanampiana vatosoa.
Ny maha-zava-dehibe ny vatosoa
Ny vatosoa dia manokatra ny làlana mankamin'ny zavatra maro ao amin'ny Brawl Stars, Izany no mahatonga ireo izay te handresy azy ireo hanisy be dia be mba handrosoana aorian'ny lalao maro. Amin'ny vatosoa dia azonao atao ny mividy ireto zavatra manaraka ireto: Karakter, hoditra, boaty, Brawl Pass ary token multiplier.
Ny vatosoa dia hampandroso anao amin'ny lalao, ary ambonin'izany rehetra izany, ampanjifa ny tarehin-tsoratra tsirairay mba hampisehoana ny ranomasina tsara amin'ny lalao. Ao amin'ny Brawl Stars dia manana ny lanjany lehibe ireo vatosoa mikaroha hanatsarana zavatra sasany, tsy mila mividy azy ao amin'ny Play Store.
Tsy mila mampiasa vola ara-batana amin'ny magazay Raha te hanangona vatosoa maimaim-poana ianao, milalao ary mandany fotoana dia hahazo maro amin'izy ireo fa amin'ny farany dia manana fampiasana mitovy, mandrosoa. Ny vatosoa Brawl Stars hahazoana betsaka dia hahafahanao mahazo zavatra maro, ao anatin'izany ny boaty.
Avoty ny vatosoa amin'ny ClipClaps
Ny Clapcoins dia azo atakalo dolara na tratra, Ny clapcoins dia zava-dehibe amin'ny ClipClaps, ka izany no antony raha milalao ianao mba hahazoana vatosoa dia tranonkala iray manandanja. Noho ny dolara dia azonao atao ny manakalo azy ireo amin'ny vatosoa, izay amin'ny farany dia tena ilaina raha ny amin'ny fifanakalozana azy ireo amin'ny harena sarobidy an'ny Brawl Stars.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny manaiky ny firenena rehetra, ka raha any Espana ianao dia afaka mitsidika ny tranokala ClipClaps hahazoana vola ary manakalo vatosoa amin'ny farany. Raha mahazo ny 10 na 15 dolara ianao dia ampy ny vola hahafahanao mahatratra ny tanjona napetrakao hatramin'ny voalohany.
Milalao hahazoana tratra
Amin'ny fanokanana ora maro isan'andro amin'ny Brawl Stars dia hanampy traikefa ianao ary ambonin'izany rehetra izany dia ho azonao ny tratra izay harena sarobidy ary miaraka aminy angamba ny vatosoa tadiavinao. Miankina aminao raha mahazo bebe kokoa na latsaka ianao, fa ambonin'izany rehetra izany dia ireo zavatra mety tsy dia betsaka rehefa manokatra boaty.
GameHag dia iray amin'ireo serivisy izay mandeha miasa lafatra ankehitriny, ilaina ny manana azy eo an-tanana hatrany hahazoana vatosoa maimaim-poana, mifototra amin'ny asa sy sorona avokoa. Ho an'ny ambiny dia iray amin'ireo izay ara-dalàna ary manohy miasa tanteraka tsy misy filàna izy ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ahoana ny fomba ahazoana vatosoa maimaim-poana amin'ny Brawl Stars
WIKO VIEW 5 Plus: Fanadihadiana, famaritana ary vidiny
Ny fampiharana 5 be karama indrindra ho an'ny Android